Iko kushandiswa kwezvinyorwa - kana screenplays - mune aphasia - Cognitive Training
Zvinyorwa (kana zvinyorwa) idhaurirano kana monologue iyo, inodzokororwa kwenguva yakati rebei (kana masvondo matatu), inogona kutungamira munhu ane aphasia kuti ave ne "zviwi zvekutaura kwekutaura" kuti ishandiswe muhupenyu hwezuva nezuva. Muenzaniso wekare ndewe iyo pizzeria. Mutsara wemibvunzo nemhinduro zvinogadzirwa izvo zvinogona kutungamira munhu aphasic kuti atange kudyidzana neweta uye odha pizza yake yaanofarira.
Sezvaunogona kufungidzira, ichi chiitiko chinofanirwa kuitiswa nguva dzose uye nesimba (kanokwana kamwe pazuva kusvikira otomatiki yapera). Chokwadi chekudzokorora aya mazwi, zvirevo kana kutaura kakawanda chakatungamira mukugadzirwa kwe maturusi ekudzidzira wega, kubva kumavhidhiyo akareruka kuenda kune chaiyo software (muUnited States, semuenzaniso, iripo AphasiaScript).
Kumwe kushoropodzwa kweiyi nzira kunosanganisira kuwanda. Munhu aphasic anodzidza here akateedzana emitsara nemusoro, asi obva agona kuburitsa mamwe, kunyangwe akafanana, kana kuti achangodzokorora aakadzidzira?
Ini ndinodzidza. Mu2012 Goldberg nevamwe vaaishanda navo  vakaburitsa chidzidzo chinonakidza nezve zvinogona kuitika magwaro aya. Kunyanya, vanyori vakazvibvunza iyi mibvunzo mitatu:
Kurapa kwescript kunovandudza kururamisa, kugona kwegrama, kutaura kwakatsetseka, uye kutsetsenura kugona muzvinyorwa zvakadzidziswa?
Kurapa kwescript kunovandudza kururamisa, kugona kwegrama, kutaura kwakatsetseka, uye kutsetsenura kutsetsenura muzvinyorwa zvisina kudzidziswa?
Kurapa kuri kure (semuenzaniso videoconferencing) kuburikidza nemanyorerwo mhinduro inoshanda, pamwe chete nezvikamu zvakatarisana kumeso?
Zvidzidzo zviviri zvakanyorwa pamusoro wenyaya dzavakafunga dzakakodzera zvikamu zvitatu pavhiki (kuburikidza nemavhidhiyo mafoni) e60-75 maminetsi pamwe nemaminetsi gumi nemashanu ekuzvidzidzira epamba epamba
Mhedzisiro. Mhedzisiro yepamusoro yakawanikwa pane iyo kumhanya kwekutaura, asi mibairo yakanaka yakawanikwawo pamusoro pekudzikiswa kwekusagadzikana uye nekushandiswa kwemashoko akadzidziswa nemitsara. Yakanaka yakawanikwawo generalization isina kudzidziswa script, nemumwe wevatori vechikamu vaviri achishandisa akadzidziswa (ezvematongerwo enyika) script kuunza misoro mitsva. Chekupedzisira, kurapwa kure kwakaratidza kuve kunoshanda, kunyangwe paine mamwe matambudziko anoshanda (semuenzaniso, kushomeka kwekuenderana pakati peaudio nemavhidhiyo kana madonhwe ekubatanidza akatungamira kumifananidzo isinganyatso tsanangurwa).
Kukosha kwekuzvishingisa. Pakupedzisira, chinhu chakakosha chakazove icho che kuzvidzora, kana kuti pachinzvimbo kugona kuzvimiririra kuburitsa izwi rinokwanisa kurangarira iro izwi rakanangwa. Ichi chiitiko chakaratidza kunyanya kubatsira kana zvidzidzo zvakatadza kutanga chirevo pachavo. Semuenzaniso, mumwe wevatori vechikamu vaviri akatadza kutanga mutsara une izwi rekutanga raiti "Kuda", asi aigona kutaura zita rekuti "William". Achishandisa William sekutanga, akakwanisa kuburitsa mutsara wakatanga na "Kuda" iye ega.
Mhedziso. Izvo zvakanyanya kukanganisika zveichi chidzidzo zviri pachena zvine chekuita nenhamba diki yevanotora chikamu. Kupfuurirazve, asi iko kunetsekana kunowanikwa mune ese zvinyorwa pane iyo nyaya, zvaive zvisingaite kuziva yakajairwa mitemo yekusarudza zvinyorwa zvekudzidzisa. Nekudaro, chidzidzo chinonakidza nekuti chinogadzirisa dambudziko reruzivo kekutanga, pamwe nekupa zvimwe zvinongedzo kune kukosha kwekuzvishingisa.
Nzira yedu. Unogona kutenga kosi yedu yepamhepo "Kurapa kweAphasia" kubva pano. Iine maawa akati wandei emavhidhiyo ane mareferenzi kumabhuku uye zviitiko zvinoshanda (kuwedzera kune zvigadzirwa) zvekurapa aphasia. Mutengo i € 80. Kana yangotengwa, iyo kosi ichave inowanikwa nekusingaperi.
 Goldberg S, Haley KL, Jacks A. Kudzidziswa kwechinyorwa uye generalization kune vanhu vane aphasia. Am J Kutaura Lang Pathol. 2012 Aug; 21 (3): 222-38.
aphasia, inoyerera aphasia, isiri-fluase aphasia, aphasia Exercise, mahwindo, chinyorwa
Iko kushandiswa kwezvinyorwa - kana screenplays - mune aphasia2020-12-282021-01-01http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/12/screenplay-408252_1280.jpg200px200px
Aphasia uye kutsungirira: zvavari uye zvinogona kuitwaaphasia